फिल्म "सुन खानी": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र,
1977 मा, आपराधिक षड्यन्त्र, असामान्य अलग र शानदार डाली संग फिलिम बाहिर सोभियत स्क्रीन मा। तस्विर "सुन खानी" भनिन्छ। जो तारा अङ्कित? यो चलचित्र के हो?
यो फिलिम - एक क्लासिक सोभियत चलचित्र-गुप्तचर। Olegom Dalem, - समय को स्क्रीन वास्तविक तारा मुख्य भूमिकाको को मात्र कार्यान्वयन यूजीन Kindinovym र Mihailom Gluzskim - फिल्म "सुन खानी" को सफलता को लागि एक ग्यारेन्टी रूपमा सेवा गरे।
Oleg दल यो गुप्तचर चलचित्र फिलिम मुजरिम चोर प्ले। Lyubov पोलिशचुकलाई "सुन मेरो" प्रेमी आक्रमणकारीले तारा अङ्कित। अभिनेता यूजीन र माइकल Kindinov Gluzsky इमानदार र अथक प्रहरी स्क्रिनमा छवि सिर्जना गरियो। अन्वेषक-प्रशिक्षार्थी लारिसा Udovichenko प्ले। Zhanna Prokhorenko, इगोर Yankovsky, इगोर Efimov फिल्म "सुन खानी" मा समर्थन भूमिकाको प्रदर्शन। एपिसोड देखा अभिनेता - Lyudmila Ksenofontova हरमन Orlov, दिमित्री Svetozarov, Lyubov Tischenko।
फिल्म सकारात्मक आलोचकहरु द्वारा प्रख्यात थियो। सोभियत अफिसरहरू को सबै भन्दा राम्रो लिपिको लागि पुरस्कार "सुन मेरो" को निर्माताहरू थिए। अभिनेता जो आश्चर्यजनक छ, विजेता बिना बाँकी थियो। आखिर, मात्र एक खेल Olega Dalya - घरेलू फिलिम उज्ज्वल र प्रतिभाशाली मा तथ्याङ्कले - विशेष ध्यान योग्य थियो।
निर्देशक Yevgeny Tatarsky द्वारा खिच्नुभयो दुई-भाग तस्वीर को प्लट,, यो पहेली को disparate टुक्रा दर्शकहरूलाई परिचय रूपमा, सुरुमा बिस्तारै विकसित। दंड बस्ती साहसी भाग्ने कैदी बोरिस Brunow agitated। उहाँले कथा "सुन मेरो" मा protagonist हुन्छ। अभिनेता ओलेग दल भगुवा कैदी को भूमिका खेलेका।
Jewels को खोज मा
चार महिनापछि Leningrad नजिकै बाटोमा उहाँले एक कार एक निश्चित ओलेग Torchinskiy द्वारा मारा थियो। जवान बाँचे तर गम्भीर घाइते भएको थियो। आफ्नो खल्ती मा, अनुसन्धानकर्ताहरूका एक आवासीय भवन को एक योजना फेला परेन। यस समयमा, प्रहरी आफ्नो घरेलु को अस्पष्ट निगरानी घोषणा, जोडी द्रोज्दोव्स्काया व्यवहार गर्छन्।
को पहेली को टुक्रा मा यो बिन्दुबाट तेजी विकास चित्र को विषय, विकास गर्न सुरु "सुन मेरो।" लियो Lemke, - जोडी द्रोज्दोव्स्काया खेलेका अभिनेता तातियाना कैच। यी वर्ण मुख्य बाट टाढा छन्। तर, यो षड्यन्त्र अनिश्चय मा दर्शक राख्न सुरु आफ्नो फिलिमहरु को उपस्थिति छ।
Torchinsky मा पत्ता विमान, मा, बस घरेलु द्रोज्दोव्स्काया देखाउँछ। आफ्नो एक मित्र, आफ्नो जानकारी अनुसार, देश लुकेका पर्छ भनेर मान बारेमा अनुसन्धानकर्ताहरूका बताए। र चाँडै मित्र एक चक्कु घाउ संग अस्पताल स्वीकारे।
जांच मा जांचकर्ताओं को उपनगरीय क्षेत्र को पूर्व मालिक मुजरिम Brunow, त्यहाँ चोरी छोरा लुकाउन सक्ने पिता थियो स्थापित। तर escaping पछि मायावी Brunow कानून प्रवर्तन को दृश्य ले गायब। एक फोटोग्राफर भन्दा चलान शङ्काको अन्तर्गत Torchinsky कोसोभो हुन्छ। निगरानी केही उहाँलाई स्थापित गर्छ। ब्रुनो जस्तै Kosov बस गायब। यो अनुसन्धान स्टलगरिएको थियो जस्तो देखिन्छ।
तर कर्नल Zarubin सँगै जवान अधिकारीहरू Kroshina ध्यान मामला मा सबै defendants को जीवनीहरू हरेक nuance अध्ययन संग अनुभव। अनपेक्षित निष्कर्ष बनाउने, तिनीहरूले नयाँ योजना विकास, जो को केन्द्र एक चिरपरिचित प्लास्टिक सर्जन Yan Karlovich Podniesku छ। पहिले, उहाँले Brunow परिचित थियो र अर्डर एक निश्चित प्रभाव मा भएको थियो। frankness गर्न सर्जन जबरजस्ती, अनुसन्धानकर्ताहरूका एक दोहोरिने offender plasticity "को अनुहार बदलिएको थियो" भनेर पत्ता उहाँले नयाँ कागजातहरू उत्पादन र एक कल्पित नाम, अन्य जीवनी अन्तर्गत जीवित। सर्जन विवरण अनुसार, तिनीहरूले मामला मा defendants मध्ये Brunova सिक्न पहिले नै परिचित छन्।
अब तिनीहरूले दोषी नही छ जो थाह छ। तर यो आफ्नो कब्जा मा मदत गर्दैन। Saucy Brunow नयाँ रुप फेरि शाब्दिक बगैचा Drozdov मा soundly योजना लुकेर बाहिर निकल। आफ्नो ओपरेटिव कब्जा लागि याल्टा गर्न गुजर ...
यस्तो फिल्म "सुन खानी" को षड्यन्त्र छ। Oleg दल यो फिल्म आफ्नो नकारात्मक भूमिका को केही एक प्ले। दर्शक अक्सर एक आकर्षक र सुन्दर चलचित्र वर्ण तिनलाई देखे। त्यो संधै जस्तै, उत्कृष्ट, अभिनेता-मुजरिम चोर को भूमिका संग copes, तर।
Katrin Denev: को XX सताब्दी को प्रसिद्ध Actresses जीवनीहरू
सबै भन्दा राम्रो एनिमे छोटो शीर्ष
चलचित्र "लाल गर्मी": अभिनेता र भूमिकाको
छोराछोरीको मूत्र मा एसिटोन
Boletus कसरी खटाई मा हालन गर्न? धेरै व्यञ्जनहरु
अभिनेत्री ओल्गा सुटुलोवा: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, उत्कृष्ट चलचित्रहरू
को Tver क्षेत्र को, सांस्कृतिक ऐतिहासिक र प्राकृतिक आकर्षण
एक उडान परिचर काम। उडान परिचारक को कर्तव्य। कति परिचारिका कमाता?
तपाईंको कम्प्युटरमा चालकलाई कसरी अद्यावधिक गर्ने?